‘Michael Carrick waa Pirlo-ha Manchester United’. – Gool FM
‘Michael Carrick waa Pirlo-ha Manchester United’.
Kaafi October 21, 2016
(Manchester) 21 Okt 2016. Michael Carrick waa qasab in uu khadka dhexe ku weheliyaa Paul Pogba madaama uu yahay qofka ugu dhaw Andrea Pirlo ee ay Manchester United haysato, sidaas waxaa yiri Owen Hargreaves.
Laacibka dunida ugu qaalisan waxa uu mushaakil kala kulmay sidii uu u sameeyn lahaa bandhigyadii u qasabtay Jose Mourinho ka soo bixinta £89 million.
Hase ahaatee, Pogba waxa uu kula soo bilowday bartamaha gegida kulankii khamiista Carrick markii ugu horreeysay xilli ciyaareedkan, waxa uuna dhaliyey laba gool iyada oo ay United garaacday Fenerbahce tartanka Europa League, Hargreaves waxa uu dareensan yahay in is garabsigoodu yahay midka ugu mira dhalka badan.
“Ciyaaryahanka ugu dhaw Prrlo waa Carrick – kaas oo uu ku haystay Juventus markii uu heerkiisa ugu wanaagsan joogay,” ayuu yiri laacibkii hore dhexda uga dheeli jiray Man Utd oo u waramayey BT Sport.
“Waxaan qabaa in Mourinho uu isku dayayo helida wehelkiisa ugu wacan, waxaan qabaa in Carrick uu kooxdaas u ciyaaro.”
'Mourinho ilama hadli jirin', - Moses